Date My Pet » 6 Mibvunzo Vakaroorana vanofanira Funga Usati Kuwana A Pet
kubudikidza Date My Pet Staff
6 Mibvunzo Vakaroorana vanofanira Funga Usati Kuwana A Pet
Last updated: Jan. 12 2021 | 3 Maminitsi verenga
Fungidzira izvozvo: Wawana kuti chinokosha munhu, uye ukama hwako zvakazonaka. Asi chii chaunoita kana wako kukosha dzimwe anoratidza kutora achikwakuka uye kuita kuzvipira kune mumwe…nokusvika chipfuwo? Usati wedzera imbwa kana katsi kuti itsva hwenyu, funga kuchengeta mibvunzo inotevera mupfungwa.
"Ko isu tose tinoda chipfuwo?"
Ane mhuka muupenyu hwako kunogona kuva chiitiko mubayiro uye upenyu-kusimbisawo. Rinogonawo kuva dzinodhura uye nguva yakawanda, pamwe ASPCA kupima svikiro kadikidiki imbwa hungada paavhareji $1,580 pagore zvokudya, murapi wemhuka mari, uye nezvimwe hanya, apo katsi hungada paavhareji $1,035 pagore. Chisarudzo kuwana inovaraidza anofanira yakawiriranwa, uye uitwe refu usati chaizvoizvo kuwedzera imbwa, katsi, kana zvimwe mhuka kuti upenyu hwako. Ramba uchifunga chinokosha zvimwe dzingasada kuva chipfuwo; kana zviri izvo, zvino kuremekedza pfungwa dzavo uye funga vakabata kure pandaivabudisa kumusha mhuka mutsva. Kana kana wenyu anotova chipfuwo, ipapo unofanira kufunga mhuka yenyu zvinodiwa pakuita chisarudzo.
"Kworudzii hwechipfuwo zvakarurama kwatiri?"
Kana uri achifananidzira Mugovera mangwanani jogs mupaki ane Labrador, asi venyu kukosha umwe kufunga stocking hombe tangi nehove, ipapo unofanira kutaura hworudzii mhuka imi vaviri vanoda. Kufungawo chero nezvimwe zvinhu iwe kana wako kukosha zvimwe vane, kukura vamuri mhenyu nzvimbo, rako basa purogiramu, uye mari kana kusarudza chipfuwo. Shandisa mukana uyu kuti kukurukura kukura hwechipfuwo yaunoda, wo. Imbwa hombe anogona kupa zvakawanda matambudziko uye mari pane duku pamakumbo imbwa.
"Sei dzinovaraidza zhinji hatidi, zvakadaro hazvo?"
Kunyange zvazvo iwe chinokosha nevamwe vangave vakabvumirana pamusoro mhando mhuka yaunoda, unofanira kubvumirana pane sei dzinovaraidza zhinji uchida. With mumwe okuwedzera dzinovaraidza, kwako basa uye mari chokuita kutarisira mhuka kuchaita kunowedzerawo. Yeuka chero mitemo nemirayiro angashanda tichitarisa sei mhuka zhinji unogona kuva, kunyanya kana uri Rental.
"Pane inovaraidza vachararama?"
Vamwe vakaroorana, vachigara pamwe hazviitwi vakawanda zvikonzero. Kana iwe chinokosha nevamwe havasi vapenyu pamwe chete, ipapo unofanira kusarudza apo Fido kana Fluffy achararama. Semuyenzaniso, Uchasarudza kuchengeta mhuka yenyu mumba mako nemumwe muNguva vhiki, muchine mhuka pakupera kwevhiki? Pavanosarudza pamusoro chourongwa, chinhu kwenyu basa purogiramu uye imba kuitika kana furati.
"Ndiani anokonzera Pet Care?"
Kana iwe kukosha vamwe vanogara akatsemura mari, zvino kusarudza ndiani anokonzera Pet Care anogona moot. zvisinei, kana usina nguva dzose zvakaenderana akatsemura mari, kana mumwe wenyu anoita yekudyidzana kupfuura vamwe, kusarudza uyo vanofanira kubhadhara wemhuka mabhiri uye dzinovaraidza zvokudya kukurukurirana unofanira kuva wako kuchikosha nevamwe usati kuuya kumba katsi mutsva kana imbwa.
"Achaita kupi tinowana chipfuwo?"
Iwe nemumwe wako vangadaro vakabvumirana nezvokuchera imwe mhando hwechipfuwo. Asi muchawana apo imbwa yenyu itsva, katsi, kana BoyzMikaro? Zvichida mumwe wenyu ane manzwiro akasimba panyaya dzinovaraidza vakatengwa vachibva muchitoro kana mwene. Kana zviri izvo, imi vaviri vanofanira mungarava uye vakabvumirana pamusoro apo unogona kuwana imwe mhuka.
Ane pachena kukurukura kwako mhuka inokosha mamwe pamusoro mhando uye vangani ndiro danho rinokosha ukama hwako. Yeuka kuti kuva akatendeseka uye kukoshesa nemumwe maonero.
How To Tora Your First Matanho With Online Dating
5 Ita uye Nezvokusaita pamusoro Kunobudirira Online Dating